आइपिएल फाइनलमा देखिएकी यी सुन्दर युवती सामाजिक सञ्जालमा भाइरल ! आखिर को हुन् उनी ! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > खेल > आइपिएल फाइनलमा देखिएकी यी सुन्दर युवती सामाजिक सञ्जालमा भाइरल ! आखिर को हुन् उनी !
May 15, 2019 May 15, 2019 GRISHI515
इण्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको १२औँ सस्करण सकिएकीसँगै आइपिएलमा उपस्थित भएकी एक युवती सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकी छन् । फाइनल खेलमा चेन्नई सुपर किंग्सलाई एक रनले पराजित गर्दै मुम्बाई ईण्डियन्स च्याम्पियन बन्यो । अन्तिम बलमा २ रन चाहिएको अवस्थामा लासिथ मालिंगाले सार्दुल ठाकुरलाई एलबीडब्लु आउट गरेपछि मुम्बाई विजयी भयो ।
अन्तिम ओभर धेरै कसले जित्छ भनेर धेरै उतारचढावहरु देखिए । खेलमा चेन्नईलाई जितको लागि अन्तिम भोभरमा रन चाहिएको थियो । लाथिस मलिंगाको पहिलो बलमा वाटशनले १ रन लिए । दोस्रोमा जडेजाले १ रन लिए तेस्रो बलमा वाटशनले २ रन बटुले । वाटशनले चौथो बलमा दुई रन लिए । चौथो बलमा दुई रन लिने क्रममा आउट भएपछि रोमान्चक मोडमा पुगेका थिए । पाँचौ बलमा ठाकुरले २ रन लिएपछि अन्तिम बलमा जितको लागि २ रन चाहिएको थियो ।
अन्तिम बलमा सार्दुल ठाकुर एलबीडब्लू आउट भएपछि मुम्बाइ १ रनले विजयी भयो । खेलको बिचमा देखिएकी एक युवती एक समर्थक हुन् । उनको तस्वीर टेलिभिजनको स्क्रिनमा पटक पटक देखिएको कारण भाइरल भएकी छन् । खेल चलिरहेको बेला आइपिएलको क्यामेरा मेन क्रुको ध्यान टिभीको स्क्रिनमा पटक पटक देखिन पुग्छ । सोही फ्यानको कारण उनी भाइर नै भइन् । टिभीको स्क्रिनमा कयौँ पटक देखिएकी उनको क्यामेरा क्रुलाई म्यान अफ द म्याच दिनुपर्ने भन्दै भाइरल गराइएको हो । ती महिलालाई अहिले लक्की चार्मको रुपमा लिएर व्यापक खोजी भइरहेको छ ।
यस्तो थियो राजिव जैनलाई एक करोड जिताउने प्रश्न